(L) အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် NSW ရှိလူငယ်များမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကို ဦး တည်စေသည်ဟုရဲများကဆိုသည် (၂၀၁၄) - Your Brain On Porn
ဗ Harry (ဆောင်းပါးလင့်ခ်)
တနင်္ဂနွေကြေးနန်း - အောက်တိုဘာလ 12, 2014
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရန်လွယ်ကူ access ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသတိပေးခဲ့သည်ပြီ, ငါးနှစ်နီးပါးနှစ်ဆမှလူပျိုတို့ဖွငျ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုစေခဲ့ပါတယ်။
25 များ၏အသက်အရွယ်အထိလူတို့သညျလေးစားမှုဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ပို. ပို. ခက်ခဲတှေ့နေကြနဲ့သူတို့ရဲ့လိင်ဆက်ဆံဖက်ဆီသို့ဦးတည် ပို. ပို. အကြမ်းဖက်ဖြစ်လာကြပါပြီ, NSW ရဲတပ်ဖွဲ့လက်ထောက်ကော်မရှင်နာမင်းကြီးမာကု Murdoch အရသိရသည်။
တရားရုံးစာရင်းဇယား NSW အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး၏ပြစ်မှုထင်ရှား 10 နှင့် 29 နှစ်ကြားယောက်ျား၏နံပါတ်နီးပါး 70 အတွက် 2008 အတွက် 140 ယုံကြည်မှုများကနေ 2013 ရန်, အတိတ်ငါးနှစ်အတွင်းနှစ်ဆထားပြီးပြသပါ။
အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုမြင့်တက်ခဲ့ကြစဉ်အခါ, ကိန်းဂဏန်းများ 10 အတွက်ဘယ်သူမျှမနှိုင်းယှဉ်, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး၏ပြစ်မှုထင်ရှား 17 နှင့်အတူ 27 နှင့် 2008 နှစ်ကြားယောက်ျားလေးအတွက်အများဆုံးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ကြသည်။
မစ္စတာမားဒေါ့ဟာမကြာသေးမီကအဖြစ်အပျက်မှန်မှန်သူမ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမိမိအ 16 နှစ်အရွယ်ရည်းစားနှင့်အတူလိင်ခဲ့သူတစ်ဦး 16 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါဝင်ဟုဆိုသည်။
မေးခွန်းထုတ်သောအခါ, ကောင်လေးသူကရာဇဝတ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်မသိဟုဆိုသည်။ မိမိအသားကောင်နဲ့အတူတူပါပဲဟုပြောသည်။
"babyish အလွန်သုံးစွဲနိုင်သည်နှင့်မိဘများအပေါ် filter များထားလျှင်ပင်၎င်းတို့၏အင်တာနက် access ကိုနေရာတိုင်းဖြစ်ပါသည်, သင်ပင်သင့်ဒေသခံစာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏အိမ်သို့သွားနိုင်ပါတယ်" ဟုမစ္စတာမားဒေါ့ကပြောပါတယ်။
မစ္စတာမားဒေါ့ဟာကိန်းဂဏန်းများကိုရည်မှတ်စဉ်တွင်အများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပြစ်မှုများ unreported သွားလေ၏ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအပြည့်အဝကိစ္စကို၏ပြင်းထန်မှုကိုထင်ဟပ်ဘူးကပြောပါသည်။
သူလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ 15 နှင့် 25 ၏အသက်အရွယ်အကြားအထီးပင်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်ရယူသုံး, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏အကြီးမားဆုံးအသုံးပြုသူများအခဲ့ကြသည်နားလည်သဘောပေါက်ဟုပြောသည်။
ပြည်တွင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဟာသူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလူငယ်များကိုမေးမြန်းထားတဲ့အဖြူရောင်ဖဲကြိုးသြစတြေးလျရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းသဘောထားတွေစစ်တမ်း, ဖြေဆိုသူရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမို 40 မုဒိမ်းမှုယောက်ျား၎င်းတို့၏အလိုဆန္ဒများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ထံမှရလဒ်ယုံကြည်သည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့သက်ဆိုင်ရာနေကြသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရန်လွယ်ကူ access ကိုသူတို့ရဲ့လိင်ဆက်ဆံဖက်ဆီသို့ဦးတည်လူပျိုတို့ထက်ပိုသောအကြမ်းဖက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။
"ငယ်ရွယ်သြစတြေးလျ၏တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့အချိုးအစားယောက်ျားကနေအဓမ္မပြုကျင့်မှုရလဒ်တွေကိုလိင်အဘို့မိမိတို့လိုအပ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမထင်မမှတ်။ ညစ်ညမ်းကြီးမားတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်၏။ "
အဖြူရောင်ဖဲကြိုး CEO ဖြစ်သူ Libby ဒေးဗီးစ်အကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအတုယူလုလင်တို့သည်တစ်ခုတိုးလာရှိခဲ့ဟုဆိုသည်။
လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလေ့လာနေသူကို Macquarie တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ Catharine Lumby, ညစ်ညမ်းချေမှုန်းရေးမိန်းမတို့အားပြီးသားအကြမ်းဖက်ယောက်ျားလေးများနှင့်အမျိုးသားများအားပေးနိုင်ကြောင်းစဉ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဟုဆိုသည်။
"ဒါဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကပ်ရောဂါဖြစ်ခြင်းနှင့်အလွန်အင်တာနက်ကျဆငျတူနေပါတယ်" ဟုပါမောက္ခ Lumby ကဆိုသည်။
* အာမခံ Tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းများအပါအဝင်အိမ်တွင်ရှိသမျှသော device များ, သူတို့မသိရပါဘူး PIN ကိုနံပါတ်များကိုတပ်ဆင်ထားကြသည်
* သူတို့ရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်သင့်အိမ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာမိဘ၏ lockout သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး software ကို install လုပ်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါ
* အာမခံသူတို့ရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုသာထိုကဲ့သို့သော Lounge အခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်မီးဖိုချောင်ဧရိယာအဖြစ်, ဗိမာန်ဘုံဒေသများရှိဖြစ်ပျက်
အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများအတွက် * သတ်မှတ်ရန်အချိန်ကန့်သတ်
* အများပြည်သူသုံး Wi-Fi ကိုအရပျ၌ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါသတိပြုပါ
* သင့်လျော်သောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သူတို့အပညာသင်ပေး
ဒါကြောင့်တစ်ဦးသည်အသက်စိစစ်အတည်ပြုစနစ်ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင် * ဒါဟာ R15 + သို့ MA18 + အဖြစ်ခွဲခြား '' ထုတ်လွှင့် '' အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့သြစတြေးလျအတွင်းအင်တာနက်အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးဘို့တရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်
အင်တာနက်အသုံးပြုသူအသက်အဆုံးအဖြတ်နီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ * အသက်အရွယ်စိစစ်အတည်ပြုစနစ်များကိုမကြာခဏအလွန်လွယ်ကူစွာအသက်မပြည့်သေးကလူတွေကြည့်နေကြသည်
* ကလေးညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် bestiality ညစ်ညမ်းသုံးစွဲအားလုံးအခြေအနေများအောက်တွင်တရားမဝင်ဖြစ်ပြီးတက်ကြွစွာအာဏာပိုင်များ၏စောင့်ကြည့်နေသည်